वहाँ केहि केहि विशेष रूप देखि एसईओ को लागि चार्जिन्स को बारे मा? के तपाईं खोज इन्जिन अनुकूलन स्टार्टर मार्गदर्शक छ?
खोज इन्जिन अनुकूलन (वा एसईओ) एक बढ्दो फैलिएको अभ्यास दुवै बढ्दै जान्छ: कार्बनिक खोज इञ्जिनबाट वेबसाइटमा ट्राफिकको मात्रा र मात्रा. बस राख्नुहोस्, एसईओ सबै लक्षित लक्ष्य दर्शकहरूलाई देख्न सकिने सबै कुरा हो.
एसईओ लगभग उत्पादन को लागी लगभग कुनै पनि कम्पनी द्वारा उत्पादित गर्न सकिन्छ - सम्भवतः त्यहाँ कुनै कोहि छ कि यो सक्रिय खोज को लागी. एक प्रभावी एसईओ रणनीतिको साथ, सम्भावनाहरूले Google मा प्रासंगिक सर्तहरू खोज्न सक्छन् जुन तिनीहरूलाई तपाईंको व्यवसायमा आकर्षित गर्दछ. जब यो सही छ कि लगभग हरेक व्यवसाय एसईओ बाट लाभ उठाउन सक्दछ, Semalt्ट विशेषज्ञहरूले फेला पारेका छन् कि धितो सहित केही उद्योगहरूले खोजी इन्जिन अनुकूलनबाट अरुलाई भन्दा बढी लाभ उठाउन सक्छन्।.
माथि उल्लेखित रूपमा, एसईओ को प्राथमिक उद्देश्य स्रोत बनाउन मानिसहरु लाई हेर्ने हो जुन तपाईं तपाईलाई खोज्न चाहानुहुन्छ।. ती व्यक्तिहरूको लागि दान गर्ने व्यक्तिहरूको लागि, यसको अर्थ एकै कारणले सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूमा पुग्नको अर्थ छ, र तपाईंको कामलाई समर्थन गर्न दान गर्न इच्छुक.
हुनत यद्यपि एसईओ को करिब करिब करिब करिब केहि खास चीज छैन, तपाईं तल सूचीबद्ध एसईओ सिफारिसहरुमा राम्रो छ. तिनीहरूले तपाईंलाई अझ राम्रो बुझ्न मद्दत गर्नेछन् किन एसईओ यस्तो उद्योगको लागि यति धेरै कुरा गर्दछ र साथै तपाईंको दानको लागि एसईओ अभियान सिर्जना गर्दा कहाँ सुरू गर्ने भनेर व्याख्या गर्नुहोस्।.
खोज इन्जिन अनुकूलन चार्टरी संस्थाहरूको लागि स्टार्टर गाइड
कारणहरू किन तपाईंको चासो एसईओमा संलग्न हुनुपर्छ:
धन उठाउनुहोस्: अनलाइन दान योगदान गर्न द्रुत र सजिलो बाटो. एसईओ उत्तम तरीका हो जसले कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो अनलाइन दान पृष्ठमा ड्राइव गर्न सक्छ. (1 9)
जागरूकता बढाउनुहोस्: एक charity वेबसाइट एकदम सही मौका हो जसले आफ्नो संगठनको बारेमा शब्द फैलाउन सक्छ, जसले मानिसहरूलाई आफैंलाई हेर्नको लागि मौका दिन सक्छ. (1 9)
विश्वास र वफादार बनाउनुहोस्: राम्रो तरिकाले लागू गरिएको एसईओ रणनीतिले बलियो प्रतिष्ठा सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ. यो निम्नानुसार कार्य गर्दछ: जब तपाईंको दानलाई अनलाइन खोज्न सजिलो हुन्छ, तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अधिक भरोसा छ.
खोजशब्दों को ध्यान दिनुहोस
तपाई लाई ध्यानपूर्वक आफ्नो लक्षित कीवर्ड को चयन गर्नु पर्छ।. सामग्री को सबै भन्दा नजदीक वर्णन गर्नेहरूलाई छान्नुहोस्. तपाईंको सम्भावनाहरूको बारे सोच्नुहोस्, तिनीहरूले तपाईंको दान पाउन खोज्ने हुन सक्छन्. स्मरणीय छनौटहरू चयन गर्न प्रयास गर्नुहोस्, ताकि त्यहाँ थप सम्भावित व्यक्तिहरू तपाईंको संगठन फेरि Google ले र यसको बारेमा अरूलाई बताउनेछ.
भौगोलिक स्थान Matters
आफ्नो दान स्थान को निर्दिष्ट गर्नुहोस. व्यक्तिहरूलाई तपाईंको संगठन कहाँ सञ्चालन गर्दछ थाहा दिनुहोस्. सम्झनुहोस्, स्थान एक धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हो. पहिलोमा, समयको बर्बाद नगर्नुहोस् तपाईंको क्षेत्र भन्दा बाहिरको स्थान निर्धारण गर्न. स्थानीय एसईओमा तपाईंको प्रयासहरू फोकस गर्न थप लाभदायक हुनेछ.
तपाईंको सामग्री ताजा र उपयोगी राख्नुहोस्
प्रासंगिक सामग्री तपाईको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ. यो अत्यन्त सिफारिस गरिएको छ कि तपाइँ नियमित रूपमा नियमित रूपमा नयाँ, उपयोगी र रोमाञ्चक सामग्रीसँग आफ्नो साइट भर्नुहोला. ध्यान राख्नुहोस्, गुगल र अन्य खोज ईन्जिनियरिङ् इनाम साइटहरू बहुमूल्य सामग्रीको साथ आफ्नो रैंकिंग बढाउन को लागी यस्तो कारकहरु मा आधारित गरेर:
समय साइट मा बिताईयो; (1 9)
वेबसाइट अन्वेषण; (1 9)
साइटमा बाहिरी लिङ्कहरू. (1 9)
साथै, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ध्यानाकर्षण वेबसाइट मोबाइल-अप्टिमाइजेसन र राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि त्रुटि-मुक्त हो।.
तपाईंको चैरिटी एसईओ
को लागि जानुहोस् कि तपाईले यो खोज इञ्जिन अनुकूलन स्टार्टर मार्गदर्शकको मजा लिनुभयो।. ध्यान दिनुहोस् कि यी एसईओ को रैंकिंग धेरै अधिक समय र धन व्यतीत गर्न को लागी केवल केहि सुझाव हो Source . तपाईंको दान एसईओ अभियान सिर्जना गर्न सुरु गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् एक महिनामा तपाईंको रैंकिंगमा के हुन्छ?